हामीले बुहारीलाई रंगेहात भेट्दा पनि केहि गर्न सकेनौ, मेरो भाइले सहन नसकेर आ.त्मह.त्या गर्यो भन्दै भक्कानिइन दिदि ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
March 3, 2021 AdminLeaveaComment on हामीले बुहारीलाई रंगेहात भेट्दा पनि केहि गर्न सकेनौ, मेरो भाइले सहन नसकेर आ.त्मह.त्या गर्यो भन्दै भक्कानिइन दिदि ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
झापा । नेपालमा आजकल हरेक दिन न’राम्रा खबरहरु एकपछि अर्को गर्दै आइरहेका छन । कहिले ह.त्या कहिले आ.त्मह.त्या कहिले चोरी त कहिले लुटपाट । सं’कटकाल सकिएपछि शान्त बनेको नेपालमा कहिलेकाही नसोचेको घटना सुन्नु पर्दा सबै नेपालीहरुलाई दु’खी बनाउदै आएको छ । झापामा फेरि अर्को सोच्नै नसकिने घ’टना घटेको छ ।
श्रीमान १५ बर्ष बिदेशमा रगत पसिना बगाउन जान्छन । कमाउछन घरमा पठाउछन । कति धेरै सपना थिए होला त कति चाहना । आफ्नो छोरा श्रीमती अनि परिवारका लागि रातदिन मेहेनत गरेर भबिस्यमा परिवारसंगै रमाएर बस्ने सपना बोकेका एक नेपाली युवाको सपना एक्कासि टुटेर जान्छ । श्रीमान बिदेशमा पसिना बगाउने अनि श्रीमती भने यता सोल्टीसंग रमाउने गरेपछी गाउँमा थाहा पाएर सोल्टीसंगै घरैमा रङ्गेहात प’क्राउ गर्छन ।
मध्यरातमा समातेपछि घरबार बिग्रने डरले समाजका केही ब्यक्तिले माफी दिएपछी त्यो कुरा बिदेशमा हुने श्रीमानले थाहा पाएर नेपाल आएपछी झगडा पर्छ अनि श्रीमानले बल्ल थाहा पाउँछन कि श्रीमती आफुसङ नबस्ने र अर्कैसङ जाने कुरा । करिब ३० लाख ऋणमा डुबेको अनि श्रीमतीले समेत आफुसङ नबस्ने कुरा थाहा पाएपछि सारा सन्सार नै श्रीमती ठानेका उनले सन्सारमा बाच्नुको कुनै औचित्य नभएको सम्झेर अन्तिममा बिदेशबाट आएको ६ दिनमा झु.न्डिएर आ.त्मह.त्या गर्छन ।
यो कुनै कथा नभएर झापामा घटेको घ’टना हो । घटना घटेको थाहा पाएपछी सुपर अनलाइन टिभी टिम त्यहासम्म पुग्दा १० १२ बर्षका छोरा आफ्ना आ.त्मह.त्या गरेर मृत्यु भएका बुबाको किरिया गर्दै बसेका रहेछन । उनैसंग गरिएको कुराकानी हेर्नुहोस सुरुदेखीको सम्पुर्ण नालीबेली बताउदै बिदेशबाट आएको ६ दिनमै झु.न्डिएर आ.त्मह.त्या गर्नुको भित्री रहस्य खोलेका छन ।
श्रीमानलाइ झुक्याएर उनले बिभिन्न समुहबाट पैसा झिकेर फरार भएको गाउलेहरुको दाबि रहेको छ । यसै बीच घ’टनाबारे बोल्दै मृ’तकको दिदि मिडियामा आएकी छन । भिडियो यहाँबाट हेर्नुहोसः